Photo Shooting BTS - Yangon Thu Michelle Video
Photo Shooting BTS
Activities, Video May 04, 2018
ဒီအပတ်ရန်ကုန်သူမီရှဲရဲ့အားလပ်ချိန်မှာဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြထားပါတယ်။အခုခေတ်က ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ (photo shooting) လွယ်လာတဲ့အပြင် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံဖို့လဲ နှစ်သက်လာကြတယ်လေ။
အဲ့ဒါကြောင့် ရန်ကုန်သူမီရှဲ လျှောက်မသွားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ မော်ဒယ်လဲလုပ်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းရဲ့ (photo shooting) နောက်ကွယ်ကအကြောင်းလဲသိရ အစီအစဉ်လည်းရိုက်ဖြစ်အောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်းကိုဗီဒီယိုရိုက်ကွင်းနဲ့ ပေါင်းပလိုက်တယ်။
မော်ဒယ်လုပ်ရတာ လွယ်တာမှတ်လို့… ။မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးကပို့စ်ပေးနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။လူကြားထဲမရှက်မကြောက်ပို့စ်ပေးနိုင်ရသေးတယ်။ပိန်တာဝတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ပြီးတော့အစောကြီးထပြီးမိတ်ကပ်အလိမ်းခံဖို့တော်ရုံဝါသနာနဲ့မရဘူး။ရိုက်ရက်တွေလေးငါးရက်လောက်ဆက်နေရင်ပိုဆိုး။ဆံပင်ဆိုတာအပူချောင်းနဲ့လုပ်လိုက်၊ကော်ဖြန်းလိုက်၊ဆံထုံးထုံးလိုက်နဲ့လုံးလုံးပါးတာပဲ။ဆံထိုးဆံတုသရဖူတွေဂွထိုးတွေကြောင့်ခေါင်းမှာဈေးဗန်းရွှက်ထားရတယ်။
နောက်ပြီး အကျီတွေက ကြည့်တော့သာ လှတာ။ ဝတ်ရင် လေးတယ်၊ အစတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေရင် ယားတယ်။ ထိုင်မသိမ်းတွေဆို မတရားညှိတယ်။ ရင်တု တင်တုတွေ ဝတ်ပြီး အပြင်ထွက်ရိုက်ရင် ရာသီဥတုကြောင့် ရင်တု တင်တုကြားထဲက ချွေးနဲ့တင် အအေးမိဖျားနိုင်တယ်။ ကိုယ်ကြပ်အကျီကြောင့်အသက်ရှုလို့ကမဝ။ဓာတ်ပုံထဲမှာလှနေချင်တယ်လေ။
နေလုံးမျက်နှာတည့်တည့်ထိုးနေတာကို ချစ်သူအလား ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ကြည့်ရတယ်။ မီးခိုးတွေ ပါလာရင် အသက်အောင့်ထား မျက်တောင်မခက်နဲ့။ မျက်စိထဲ မီးခိုးငွေ့ဝင်ရင် ကြိတ်ခံပဲ။ မိုးရေထဲရိုက်ရင် မိုးရေစိုတယ်ဆိုတာ သာမန်။ ပုံမှန်အချိန်ဆို ရေဝပ်နေတဲ့ မြက်ခင်းဆို ကွေ့ရှောင်သွားတာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် အဲ့ဒီမြက်ခင်းပေါ်လှဲအိပ်ဆို အိပ်ရတာပဲ။ ပြောရရင် အများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဓာတ်ပုံ edit လုပ်ပြီး ပုံကောင်းကောင်းလေး ထွက်လာရင် အပေါ်ကအကြောင်းတွေ အကုန်မေ့ …။
ဒီရိုက်ကွင်းမှာဆို ကမ်းစပ်နားမှာ ရိုက်နေတုန်း သစ်ရွှက်နဲ့ လျှောနေလို့ ချော်မလဲအောင် သစ်ကိုင်းကိုင်ထားတာ။ ဂါဝန်အောက်မှာ သေတ္တာတစ်လုံး ခုထားရသေးတယ်။ အကျီအနီနဲ့ကျတော့ မိုးချုပ်နေပြီ။ လယ်ကွင်းထဲမှာဆိုတော့ ခြင်တွေ ပွဲတော်အုပ်ရထားသလားပဲ။ တကိုယ်လုံး ခါနေမှ … ငြိမ်တာနဲ့ ခြင်ကိုက်ရော …။
ဒါနဲ့ ပုံတွေလှတယ် မလား …. အဲ့ဒါပဲကြားချင်တယ်… နော် …
what was I doing in photo shooting? It was an honor to work with talented photographer Saw Thinzar Htike, Nyi Min San and Aung Zay Ya. Photo shooting and modeling is my passionate work. I love to make post and smile at the cameras and pleased to see portrait. But I’m not the only one who love to do, all girls love to see how much they are beauty in the photographs and want to live the whole life in beauty.
But, the challenging is how to post, how to make it up and how to dress likeapro. For me, these steps are very important. Lets’ havealook my video during the photo shooting. This video is about the behind the scene of awesome photographs by talents photographers.
ပါဝင်ပေးကြတဲ့ မိတ်ကပ် မစုမြတ် Olive Oyl Make-up Artistry ၊ ဓာတ်ပုံ ကိုဇော်ခက် Zaw Khet ၊ မစောသဉာထိုက် Saw Thinzar Htaik ၊ ကိုညီမင်းစံ NyiMinSan Photography ၊ ကိုအောင်ဇေယျ @aung zay ya ၊ ကိုဖက်တီး၊ ကိုစည်သူ၊ ကိုသီဟ တစ်ယောက်ချင်းစီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့
Yangon Thu Michelle's Photo